Ra’iisal wasaare Kheyre oo xalay markale kormeeray saldhigyada ciidanka. – Hornafrik Media Network
Ra’iisal wasaare Kheyre oo xalay markale kormeeray saldhigyada ciidanka.
By HornAfrik	 On May 14, 2018
Hornafrik-Xasan Cali Khayre Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya ayaa Xalay kormeer oo ku ogaanayay xaaladda amniga ee magaalada caasiamdda ah ee muqdisho kusoo maray qaar kamid ah degmooyinka Gobolka Benaadir.
Reysal wasaare Xasan Cali Kheyre oo ay kormeerkiisa ku wehelinayeen Wasiirka Amniga, Taliyaha Nabad-sugidda iyo saraakiil kale ayaa ciidamadda xasilinta waxay la qaateen wakhti iyagoo kula dardaarmay inay laban-laabaan shaqada qarankooda ay u hayaan.
Wasiirka Amniga Gudaha ee Xukuuamadda Soomaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale oo ka warbixiyay kormeerka shaqo ee R/Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya uu ku sameeyay qeybo kamid ah Magaalada Muqdisho ayaa sheegay in uu ahaa mid loogu kuur-galayay Amniga Magaalada Muqdisho.
Wasiir ducaale ayaa tibaaxay Hadafkooda kormeereed inuu ahaa in Ciidamada Amaanka ay la qeyb sadaan qabowga, Maadaama aan nahay buu yiri Mas’uuliyiinta Qaranka taasina ay keentay in R/wasaaraha xukuuamdda soomaliya xasan cali kheyre nagu hogaamiyo.
Kormeerkan Amni ee xalay Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya saacadaha Badan Ku bixiyay ayaa qeyb ka ah qorshaha lagu xoojinayo Amniga Caasimadda ee Soomaliya wallow mararka qaar ay wax ka dhacaan magaalada muqdsiho iyo guud ahaan Dalka haba ugu badnaatee dilalka qorsheesan ee beryahaan dambe noqotay mid caadiya ah.
Shirka Golaha iskaashiga Dowlad Goboledyada oo manta Beydhaba ka furmaya.
Shirka madaxda dowlad goboleedyada oo Baydhaba ka furmay.